War deg deg ah:Dagaal xoogan oo ka soconaya deegaan ka mid ah gobolka Mudug – SBC
War deg deg ah:Dagaal xoogan oo ka soconaya deegaan ka mid ah gobolka Mudug
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo la isku adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka uu ka soconayo deegaanka Dhagtuur oo 155 KM dhanka Koonfureed ka xiga magaalada Gaalkacyo.
Dagaalkan oo ah mid aad u culus ayaa saaka waaberigii ka qarxay agagaaraha tuulada Dhagtuur waxaana uu dhexmarayaa laba beelood oo walaala ah oo ka tirsan qabaaa’ilka dega bartamaha Soomaaliya, kuwaasi oo ka soo kala jeeda beelaha Galmudug & Ximan & Xeeb ee Koonfurta magaalada Gaalkacyo & degmada Cadaado.
Warar SBC ay ku helayso Isgaarsiinta fooneeyaha ee halow halowga loo yaqaan ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu geystey khasaare baaxad leh, iyadoo tirada dhimashada ee maleeshiyaadka dagaalamaya lagu sheegay inay kor u dhaaftey 15 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmey in ka badan 20 qof.
Dagaalkan oo la isku adeegsanayo gawaarida dagaalka & hubka culus ee ay ka mid yihiin boobayaasha & garneylada laga rido garbaha ayaa wuxuu daba joogaa xiisado & iska horimaadyo mudoooyinkan ka aloosnaa deegaankaasi kuwaais oo u dhaxeeyey beelaha colaadu ka dhex aloosan tahay.
Dirirtan waxaa ka horeeyey gacan ka hadal ka dhashay muran ceelbiyood xoolo dhaqata beelahaasi ku murneen ceelkaasi taasi oo isku badashay in rasaas & qori laga hadlo, waxaana jirin wax dadaal nabadeed oo ku aadan gulufkan colaadeed ee ka aloosan tuulada Dhagtuur.
Dhaawacyadii dagaalkan ayaa wararku sheegayaan in loo kala qaaday Magaalooyinka Gaalkacyo & Cadaado, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada & dhaawacu inay kororto maadama dagaalkuu uu yahay mid xoogan oo wali soconaya.
mukhtar shaarub says:
ilaahoow naga qaboojj